Potika Ny Asan’ny Vehivavy Iray Olo-Malaza Amin’ny Fahitalavitra Japoney Noho Ny Fanaovany Sipa Tamin’ny Mpihira Iray Efa Manambady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2016 18:09 GMT
Ny fantadaza amin'ny fahitalavitra Becky (Havia) sy ny mpihira Kawatani Enon (havanana). Fivakin'ny soratra, avy any ambony ankavia: fanavaozam-baovao fijangajangana! Karajia tao amin'ny LINE niporitsaka mialoha indrindra ny fialantsiny imasom-bahoaka… FA NAHOANA? Sary avy amin'ny YouTube.
Nivadika ny tantaran'ilay olona iray malaza ao amin'ny fahitalavitra Japoney mitondra ny anarana hoe Becky (ベッキー, Bekkī) teo alohaloha teo tamin'ny volana Janoary raha nitatitra ny fampitam-baovao manaitaitra fa manana raharaham-pitiavana izy miaraka amin'i Enon Kawatani, 27 taona, izay mpihira ao amin'ny tarika malaza Gesu no Kiwami Otome.
Efa mahatratra folo ireo mpanohana ara-dokambarotra no nilaza fa tsy hanavao ny fifanarahana amin'i Becky intsony tamin'ny 31 Janoary. Mandritra izany fotoana izany, mbola manoka-potoana hiseho ao amin'ny tarika misy azy ihany i Kawatani, ny tarika Gesu no Kiwani Otome izay hiseho mandritra ny fandaharana fahitalavitra mozikaly malaza iray hampahafantatra ny rakikira iray vaovao izay nokasaina hivoaka amin'ity volana Febroary ity.
Nanana ny lazany tokoa i Becky, 31 taona, tao amin'ny fahitalavitra japoney tamin'ny 1999. Noho ny rainy Britanika sy ny reniny Japoney, dia fantatra amin'ny maha hafu (olona manana fiaviana metisy ny razambeny) na “manatalenta” (tarento) azy i Becky. Noho ny tanjany, ny mahasariaka azy ary sy ny maha-ikoizana azy eo amin'ny fahadiovana, dia voalaza fa Becky is said to have appeared in more television commercials than any other tarento in Japan.
Raha anaovana karoka amin'ny alalan'ny sary ny sarintavan'i Becky’ ao amin'ny kaonty Twitter-ny dia tonga amin'ny fanasana anao hijery ny “Becky, iray amin'ny tafiditra amin'ny tantaram-pitiavana tsy ara-dalàna iray” ( ベッキー 不倫 相手).”
Ny tena zava-doza ho an'i Becky dia jerena toa tsy tena amin'ny fony no nanaovany fifonana tamin'ireo mpankasitraka azy rehefa nipoaka ny raharaha. Navoakan'ny gazety mpanaitaitra Shukan Bunshun ny heverina ho resaka tao amin'ny LINE nifanaovan'i Becky sy Kawatani izay samy nanazavan'izy roa ny toe-draharaha.
Misy ireo mpaneho hevitra amin'ny aterineto naminavina fa nosovohan'ny Shukan Bunshun tokoa ny kaonty LINE an'i Becky sy an'i Kawatani ary nivoaka ampahibemaso ny resaka mialoha ny hahafantaran'izy roa fa manana porofom-pijangajangana misy eo amin'izy roa ilay gazety mpanaitaitra.
Mety mihenjana be amin'ireo vehivavy manantalenta ny tontolon'ny fialambolin'i Japan. Rehefa nitatitra ny Bunshun fa i Minegishi Minami, mpikambana mpanorina ny tarika mpihira Japoney ankafizin'ny tanora AKB48, dia mety ho manan-draharaham-pijangajangana, dia nahintsana haingana dia haingana izy ary nivoaka tao amin'ny YouTube voaharatra ny lohany.
Minami Minegishi miala tsiny noho ny filazana fisian'ny raharaham-pijangajangana. Fivakin'ny soratra: “Mendrika bedesina amin'ny zavatra rehetra aho. Mifona indrindra aho.” Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube.
Nahazo ny lohateny lehibe ihany koa ny fiarahan'ny tarika japoney SMAP tamin'ny janoary teo rehefa nilaza ry zareo fa hisaraka rehefa niaraka nandritra ny 30 taona latsaka. Vao maika moa talanjona ireo gazety mpamoaka zava-manaitaitra ao Japan rehefa nivadi-teny indray ny SMAP, ka nilaza fa hanohy ny fiarahana indray ry zareo na izany aza. Raha misy ny mpaneho hevitra sasantsasany manolo-kevitra fa ny fihetsika reraka sy nahazo taona dia mety ho avy amin'ny raboto miendrika olona, ny hafa milaza fa ny fivadihan'ny SMAP tampoka tamin'ny teniny no manaporofo ny herin'ireo sampan-draharaha misahana ireo mpanatalenta ao Japan, ary ny rafitra ara-talentan'i Japan dia toerana bitika iray amin'ny fomba fampiasan'ny Japoney izay tontolo izao amin'ny ankapobeny.